नेकपा एमालेका नेता डा भीम रावलले पनि अदालतको फैसलाप्रति टिप्पणी गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामातर्फ संकेत गर्दै राजनीतिक नैतिकताको बोध गर्नुहोला भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
‘आज सर्वोच्च अदालतको आदेशले काम चलाउ प्रमं केपीबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मान्यता र जनउत्तरदायी पद्धतिमाथि गरिएको घात र बेथितिलाई खारेज गरेको छ। के प्रमंले राजनीतिक नैतिकताको बोध गर्नुहोला ? ’ रावलले ट्विट गर्दै भने ।
आज सर्वोच्च अदालतको आदेशले काम चलाउ प्रमं केपीबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मान्यता र जनउत्तरदायी पद्धतिमाथि गरिएको घात र बेथितिलाई खारेज गरेको छ। के प्रमंले राजनीतिक नैतिकताको बोध गर्नुहोला?
मंपको विस्तार हुँदा तत्काल मैलै यस्तो ट्वीट गरेको थिएँ : pic.twitter.com/JjVziVlvd9
— Dr. Bhim Rawal (@BhimRawal179) June 22, 2021
एचआइभी सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै २० मिनेट पहिले
पृथ्वीचन्द्र अस्पतालको सुविधासम्पन्न भवन निर्माण शुरु २९ मिनेट पहिले
आज प्रतितोला कतिमा कारोबार भैरहेको सुनचाँदी ? ५० मिनेट पहिले